यी कपिलसँग ‘फ्यामिली टाइम’ ? बिल्कुलै हुँदैन !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यी कपिलसँग ‘फ्यामिली टाइम’ ? बिल्कुलै हुँदैन !
मुम्बई। कपिल शर्मा निकै राम्रा र क्षमता भएका हास्य कलाकार हुन्। जसले आफ्नो क्षमताले सानो पर्दामा कमेडीको दिशा र दशा परिवर्तन गरे। भाषाको व्याकरणको हिसावले कमेडी र कपिल दुवै संज्ञा हुन्। तर, मनोरंजनको व्याकरणमा यी दुवै एकअर्काका पर्यायवाची भएका छन्। कसैलाई हँसाउनु ठूलो काम मानिन्छ। र, कपिल यो काममा उस्ताद हुन्। जसलाई हास्य रस पैदा गर्न न अनुहार बिगार्नुपर्छ न विचित्रको व्यपहार नै गर्नुपर्छ।
कपिलको अन्दान नै यस्तो छ की उनी बोल्नु भन्दा पहिला नै उनलाई हेर्ने र सुन्ने मानिस मुस्कुराउन थाल्छन्। यो भन्दा ठूलो उपलब्धी अरु के हुन सकछ? कपिललाई आफ्नो क्षमताका बदलामा धेरै कुरा प्राप्त भएको छ। त्यो भन्दा ठूलो विषय त ठूला ठूला फिल्मी कलकार उनको शोमा देखिन लाइन लागेर उभिन्छन्, यो भन्दा ठूलो सफलता के हुन सक्छ।
करोडौं फ्यानको शक्ति हर राम्रो नराम्रोमा साथ दिन हाजिर छन्। तर, कपिलका यो पहिलो पाटो हो। अर्को पाटो त्यो हो जो क्यामेरा अफ भएपछि सुरु हुन्छ। यो पाटोमा सबै मानिस एक पटक आउँछन्। जुनले पाटोले कपिललाई सोच र इच्छा विपरित दिशमा जाने कोशिश गर्छ।
पछिल्लो समय कपिलले फोनमा एक मनारंजन पोर्टलका सम्पादमाथि गाली–गलौज र अभद्र व्यवहार गरे। कपिलले आर्थिक लाभ पाउन सम्पादकमाथि लगातार नकारात्मक खबर प्रशारण गरेको आरोप लगाएका छन्। फोनमा धम्क्याउनु पूर्व सम्पादकका विरुद्ध कपिलले ट्विटमा पनि निकै अश्लिल र आपत्तिजनक शब्दको प्रयोग गरेका छन्।
कपिलले आफूलाई सम्हाल्न अर्को तरिका पनि अपनाउन सक्थे। तर, जुन तरिका कपिलले अपनाए, त्यो राम्रो थिएन। कपिलको गुनासो आफ्नो ठाउँमा ठिक पनि हुन सक्थ्यो। तर उनको भाषा ठिक भएन। जसको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ।
पछि कपिलले अपशब्द प्रयोग गरेको ट्विट हटाए। यद्यपी कपिलले त्यसपछि पनि ट्विट गरेर आफूले जे लेखेका थिए त्यो आत्मादेखि लेखेको बताएका छन्। ‘मेरो ट्विट मेरा टीमका साथीहरुले हटाए छन्, तर मैले जे लेखेको थिएँ त्यो मेरो आत्माबाट लेखेको थिएँ,’ उनले अर्को ट्विटमा लेखेका छन्। यो ट्विटमा पनि कपिलको भाषा र उनको व्यवहारको धज्जी उडाएको छ। कपिलको यो भाषाले उनका फ्यनको चित्त दुखेको होला।
कपिल फ्यामिली शो चलाउँछन्। सबै परिवार एक ठाउँ बसेर कपिलसँग हास्छ। तर, कपिलले जुन भाषा र शब्दको प्रयोग गरेका छन् त्यो कुनै पनि परिवारकालागि सैह्य हुन सक्दैन। कपिलले जुन मेहनत र समर्पणले आफ्नो करियर माथि उठाएका छन्, त्यो अन्यकालागि पनि प्रेरणादायी छ। तर, उनको यो रुप कसैकालागि पनि आदर्श हुन सक्दैन। कपिल विवादमा फसेको यो पहिलो पटक होइन।
सुनील ग्रोबरसँग गरेका थिए अभद्र व्यवहार
२०१७ को मार्च महिनामा तपाइँलाई सम्झना होला, पुराना साथी र कलाकार सुनील ग्रोवरसँग कपिलको झगडा भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। मेलबर्नमा एक भ्रमणकाबाट फर्किँदै गर्दा जहाजमा नशामा लठ्ठ कपिलले सुनीललाई यस्ता शब्द प्रयोग गरे जसका कारण यी दुईबीचको सम्बन्ध आजपनि सामान्य हुन सकेको छैन।
अनाधिकारिक रुपमा यस्तो पनि भनिन्छ, रक्सीको नशामा कपिलले सुनीलमाथि जुत्ता प्रहार गरेका थिए। यो विषय जब विवादमा आयो त्यतिबेला सार्वजनिक रुपमा कपिलले माफी पनि मागेका थिए। त्यसपछि सुनीलले कपिललाई आफ्नो इज्जतमा बस्न र अन्य कलाकारसँग इज्जतले कुरा गर्न सुझाव दिएका थिए।
आकाशका भएको झगडापछि कपिलका धेरै साथीले त्यसको विरोध गर्दै उनको साथसमेत छोडेका थिए। कपिल त्योबेला द कपिल शर्मा शो गरिरहेका थिए। सुनीलसँगै अली असगर, चंदन प्रभाकर र सुगंधा मिश्रा शोलाई छोडेका थिए। चंदन पछि कपिलको शोमा फर्किए। कपिलको यो विवादमा फस्ने सुरुवाती चरण थियो।
अमार्यादित ट्विट प्रधानमन्त्रीलाई ट्याग गरे
यो एपिसोड भनदा पहिला २०१६, ९ सेक्टेम्बरमा कपिलको ट्विटले विवाद खडा गरेको थियो। कपिलले बीएमसीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए र प्रधानमन्त्रीलाई सो ट्विट ट्याग गरेका थिए। कपिलको ट्विटमाथि महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फणडवीसले सबै जानकारी माग गरे ताकि दोषीलाई कारवाही गर्न सकियोस्। तर यो विषयमा कपिलकै गल्ती देखियो। किनभने बीएमसीसँग कपिलको अर्पाटमेन्ट र अफिस गैरकानुनी रुपमा निर्माण गरेको प्रमाण थियो। यो विषयमा ओशिवरा प्रहरीले कपिल र विल्डर विरुद्ध उजुरी पनि दर्ता गराएको थियो।
असफलताबाट हतास छन् कपिल ?
लगातारको असफलताले कपिललाई हतास पारिदिएको छ। एउटा यस्तो समय थियो, जब कपिलको शो कमेडी नाइट्स विद कपिल सानो पर्दामा राज गरिरहेको थियो। फेरि अचानक कपिलले च्यानल परिवर्तन गरे। अर्को च्यानलमा कपिल शर्माको शो उनकै नामबाट सुरु भयो। त्यो शो त्यति धेरै सफल भएन। यही शोका क्रममा कपिलको स्वास्थ्य पनि खराब भयो। जसका कारण उनले शोको शुटिङ रद्द भयो र सेलेब्रिटीज रित्तो हात फर्किनु पर्यो।
यो शोका क्रममा कपिलले आफ्नो होम प्रोडक्शन फिल्म फिरंगीको शुटिङ गरे। तर, फिल्म बस्क अफिमा चल्न सकेन। कपिल करिव ६ महिनापछि फ्यामिली टाइम विद कपिल शर्मासँग टेलिभिजनमा फर्किएका छन्। कपिलको वापसी उनका फ्यान्सलाई किनै इन्तजार थियो। तर शोको पहिलो भागबाट नै नकारात्मक टिप्पणी सुरु हुन थाल्यो।
जसले कपिललाई हैरान बनायो। शो ठिकसँग उभिनसमेत पाएको थिएन, फेरि कपिलले एक पटक शुटिङ रद्द गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। रानी मुखर्जीसँगको उनको शो रद्द गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। यही समाचार वास्तवमा सम्पादक र कपिलबीचको झगडाको कारण बन्यो। सम्पादकसँग फोनमा गाली–गलोज मामिलामा दुवै पक्षले एक अर्का विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
फिल्म पत्रकारले गरे कडा निन्दा
कपिलको व्यवहारको निन्दा च्याम्बर अफ फिल्म जर्नालिस्टले पनि गरेको छ। जारी गरिएको बयानमा संगठनकातर्फबाट सीनियर फिल्म जर्नालिष्ट विक्की ललवानीसँग कपिल शर्माको दुव्र्यवहारको च्याम्बर अफ फिल्म जर्नालिस्टले कडा निन्दा गरेको उल्लेख छ। जसरी कपिलले विक्कीसँग फोनमा गाली–गलोज गरे। अब कपिल आफ्ना सहकलाकार र मिडियासँग दुव्र्यवहार गर्न कुख्यात हुँदैछन्।
उतार–चढाव जीवनको पाटो हो र यसलाई विवेक पुर्याएर समाधान गर्नुपर्छ। कपिलले के स्वीकार गर्नुपर्छ भने उनको यस्तो हरकतले उनलाई कतै पुर्याउँदैन। अर्को कुरा, कपिलले विक्कीकी छोरीलाई जुन अपशब्दको प्रयोग गरेका छन्, यो अक्षम्य हो। यसले कपिलको मानसिक अवस्थालाई दर्शाउँछ र त्यो स्वयं कपिलकालागि पनि राम्रो होइन। भगवान कपिलर्ला सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्।